Wafdi Ka Socda Bankiga Islaamka Oo Gaaray Kismaayo Iyo Balanqaadyo Ay Sameeyeen – Radio Muqdisho
Wafdigani ka socday Bankiga Islaamka ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo, waxaana si weyn magaaladaasi ugu soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Jubba, iyadoo wafdigaasi uu hogaaminayay Guddoomiyaha bankigaasi.
Garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ayaa markii ay ka dageen wafdiga waxa magaalada u galbiyay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Juba, iyadoo ay kormeereen qeybo ka mid ah magaalada Kismaayo, waxaana goobaha ay booqdeen wafdigaasi ka mid ah Isbitaalka, iyo Jaamacada Kismaayo, qaar ka mid ah dugsiyada Sare ee ku yaala magaalada iyo Dekeda Kismaayo.
Wafdiga ayaa markii ay booqdeen goobahaasi kaddib waxa ay sheegeen in ay wax ka qaban doonaan baahiyaha ka jira meelihii ay kormeereen oo ay ugu horeyso in magaalada ay ka fuliyaan mashaariicyo lagu horumarinayo islamarkaana socdaalka magaalada Kismaayo ay ku tageen uu ahaa mid ay ugu kuur galayeen xaaladaha ka jira.
Wafdiga ayaa sidoo kale waxa ay kulamo la qaateen mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Jubba oo ugu horeeyo madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, iyagoo ka wada hadlay arrimo la xiriira horumarinta deegaannada Maamulka Jubba uu ka arrimo iyo Bankiga Islaamka uu wax ka qabto baahiyaha jira oo ay ugu horeyso dib u dhiska iyo arrimo kale.
Magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka jira horumaro kale duwan, iyadoo magaalada ay ka soo kabaneyso dhibaatooyinkii Kooxda Nabad diidka ah ee UGUS ay ku reebeen, waxaana sii kordhayaa horumarka iyo bilicda magaalada.
Dhageyso Warka Duhur ee Radio Muqdisho 25 03 2015